Amazon Associates Central Sucks dia ratsy toa ny Commission | Martech Zone
Asabotsy, Jona 30, 2007 Alatsinainy Janoary 8, 2018 Douglas Karr
John Chow tato ho ato nanoratra ny antony tsy nampiasany Amazon ho an'ny marketing marketing, ny antony voalohany mahatonga ny komisiona ho ambany dia ambany. Saika hanatevin-daharana an'i John aho noho ny antony hafa.
Amazon dia saika tsy afaka mampiasa ny fonosana Associates-dry zareo. Tena very saina tanteraka isaky ny miditra any aho hahazoana rohy dia tsy azoko. Ity misy ohatra iray. Vao haingana aho no nividy Herd: Ahoana ny fanovana fitondran-tena amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tena toetrantsika (nataon'i Mark Earl) rehefa avy namaky momba izany tao amin'ny bilaogin'i Hugh MacLeod - gapingvoid.
Midira ao amin'ny Amazon.com Associates Central aho.
Mankany amin'ny Manaova rohy.
Safidiko Rohy momba ny vokatra satria efa fantatro ny anaran'ny vokatra.
Miditra aho omby miaraka amin'ny sokajy vokatra toy ny Books.
Valiny 10 no azoko. Amin'ireo 10, ny bokin'i Marka ihany no tena antsoina hoe "Herd" fa laharana faha-3 ao amin'ilay lisitra. Ny laharana 1 dia ny tsiambaratelo miafina an'ny elefanta. Misaotra Amazon!
Ankehitriny dia mila tsindrio "Get HTML" aho izay mitondra ahy mankany amin'ny pejy mahatsiravina mba hanaovana ny rohy:
Raha misafidy ID Affiliates-hafa aho izao, hamafana ny safidiko rehetra ilay pejy ary tsy maintsy manomboka indray aho. Arrgh.
Adikao ary apetaho ao anaty kaody ilay kaody WordPress ary apetaho.
Tsy miseho ilay sary. Fantatro fa tsy mampiditra lalan-kely mankany amin'ny sary amin'ny alàlan'ny fonenany i Amazon. Nandefa mailaka ahy indray izy ireo ary nilaza tamiko fa satria tokony hampiantrano ny sary amin'ny serverako aho. Mananihany ahy ve ianao? Moa ve tsy Amazon no tranon'i S3?
Fanavaozana: Raha mbola sahirana amin'ny fananganana rohy ianao dia tena mamporisika anao hampiasa SiteStripe an'ny Amazon Associate!
Torohevitra sasany momba ny fanatsarana ny vokatra ho an'i Amazon:
Mametraha karazana "Get Links" amin'ny pejy Login Landing.
Avelao aho hanangana ny môdely tiako indrindra ary hitahiry azy ao amin'ny kaontiko (layout 1 fotsiny no ampiasaiko).
Rehefa mitady ilay entana aho dia valio ilay modely HTML izay notendreko tao amin'ny dingana 2)
Aza miteny hoe ny HTML raha tsy HTML io. Ny HTML omenao dia tsy ahitana ny marina URI amin'ny sary!
Azafady azafady avy amin'ny rohinao an-tsoratra tsotra ireo pikantsary fanarahana sary. Geesh. Manosika ny fisehoko io. Topazo maso eto ambany izay misy rohy Amazon ho an'ny "Ajax". Jereo ny elanelana aorian'izany?
Ity dia maharitra 20 minitra vao hahitako ny kaody darn ary ampidininy ao anatin'ny iray minitra. Raha ny marina rehetra dia heveriko fa tsy niova ny endrik'ity serivisy serivisy ity hatramin'ny nanombohany. Ny mpanorina rohy aza mbola mandefa lamosina (Amazon - jereo Ajax amin'ny safidinao amin'ny boky). Nahatsiravina izany tamin'ny andro 1 ary mahatsiravina izao. Ka… tsy ny komisiona ambany ihany, ny interface tsara ihany koa.
PS: Misy rohy mankany amin'i Herd tafiditra ao amin'ny my Pejy famakiana. Manantena an'ity iray ity aho!
Tags: Amazonrohy afiliana amazonaamazona mpiara-miasaamazon associate sitestripesitestripe
Jun 30, 2007 ao amin'ny 8: 12 PM
Azonao atao ny manandrana ny plugin WP ho an'ny Amazon…
Jun 30, 2007 ao amin'ny 8: 22 PM
Iray amin'ireo plugins tsara indrindra hitako io. Mampalahelo fa mampiasa ny editor tsotra aho satria manampy script sy haino aman-jery maro ao amin'ny lahatsoratro ary tsy mifanaraka izany plugin izany. Efa amam-bolana maro lasa izay ny beta - antenaiko fa ho vitany ny miasa miaraka amin'izay mpamoaka lahatsoratra eo!
Ary koa, ny mpanoratra plugin rehetra dia tokony hijery tsara - izany no iray heck plugin!
Ary koa, Amazon dia tokony hifandray amin'i manalang ary hanakarama azy hamerina ny pejy Associates-ny !!! 🙂
Jul 3, 2007 amin'ny 10: 36 AM
Ho mora be aminao ny mampiasa an'ity plugin ity, na dia amin'ny fametrahana WP default aza. Izaho koa dia mampiasa ny editor tsotra, fa amin'ny alàlan'ny default, WP koa dia nametraka ny mpanonta lahatsoratra manan-karena. Ampiasao fotsiny ny mpanonta an-tsoratra manan-karena amin'ny alàlan'ny default, ary ampifamadiho ny vakizoro raha hijery kaody raha hanao asa tianao. Avy eo, miverena mankany amin'ny fijerena lahatsoratra manankarena handatsahana ary hisintona ireo zavatra amazona ao amin'ny paosinao. Tsindrio fanampiny fotsiny io, ary avy eo azonao atao ny mampiasa ny mpanitsy tianao indrindra amin'ny ankamaroan'ny asanao!
Jul 4, 2007 amin'ny 9: 53 AM
Ny olana amin'ny tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra manankarena dia ny famafana tanteraka ireo tagan'ny script (raha mampiditra horonantsary YouTube) ianao.
Jul 1, 2007 amin'ny 4: 09 AM
Ny tahiriny dia manodidina ny 70% YTD. Tsy maintsy manao zavatra mety izy ireo!
Miezaka ny hisoroka ireo rohy vokatra ireo aho mba hanasoavana rohy lalina na fampifandraisana amin'ny sary kely toy ny ataonao eo amin'ny pejy famakianao.
Jul 1, 2007 amin'ny 10: 57 AM
Somary henjana be tamin'izy ireo aho, sa tsy izany? Tena manaja an'i Amazon aho, Robert. Nanova ny indostrian'ny varotra sy ny fizarana izy ireo. Tena very hevitra fotsiny aho fa ny orinasa iray efa mandroso dia tsy miraharaha firy amin'ny fanangonana habaka tranonkala bebe kokoa.
Raha afaka mandroso ny API misy azy ireo toa an'i Google izy ireo, dia mieritreritra tokoa aho fa afaka manana fitomboana avo lenta amin'ny varotra tranonkala. Misy orinasa sasany mizotra mankany amin'io lalana io ary mety hihoarana i Amazon raha tsy manararaotra mampiasa vola izy ireo!
Jul 1, 2007 amin'ny 9: 26 AM
Nanandrana an'i Amazon kelikely aho… mitazona boaty kely amin'ny teny anglisy fotsiny aho mainpage ao amin'ny bilaogiko… Tsy manam-paharetana aho amin'ny fananganana ireo rohy ataoko amin'ny tanana :)
Etsy ankilany, nahita an'i Roger Johansson aho avy 456BereaStreet hahomby amin'ny Amazon? (mpamorona CSS tena mahay izy) 🙂
Jul 3, 2007 amin'ny 7: 18 AM
Izaho koa nitovy lalana taminao, Doug.
Volana roa lasa izay, nanandrana nanangona vola tamin'ny iray amin'ireo bilaogiko niaraka tamin'ity Associate ity aho ary nianjera tamin'io olana io ihany. Tsy nipoitra ny sary! Ary eny, maneso anao izy ireo. 😈
Jul 9, 2007 amin'ny 8: 16 AM
Torohevitra tsara izany. Misaotra!
Aug 28, 2007 amin'ny 7: 54 AM
Whoops - Namboariko foana ny lalan'ny sary raha heverina fa bibikely izany. Mbola tsy ampiasaiko izao, ka inoako fa tsy afaka mihiaka izy ireo.
29 Feb 2008 tamin'ny 12:31 maraina
Manana antony hafa tanteraka aho amin'ny fahafantarana fa MIKASIKA ny Amazon Associates. Serivisy tsy misy ilana azy ary tsy misy fiahiany ireo mpampanonta azy ireo. Napetrako tao amin'ny bilaogiko izany .. Aparitaho!
9 Nov 2008 amin'ny 2:43 maraina
Amazon Associates dia manana serivisy ho an'ny mpanjifa tsy misy ilana azy indrindra eran'izao tontolo izao. Mamaly tokoa izy ireo ao anatin'ny telo andro fa ny valiny dia INANE. Tsy misy dikany izany. Toy ny tsy manelingelina akory ny famakiana ny fanahianao izy ireo, fa fampahalalana tsy misy dikany, tsy misy dikany ary tsy misy dikany fotsiny no alehany. Indray mandeha nangataka tamiko izy ireo mba handefa azy ireo “vaovao nangatahin'izy ireo” fa tsy nangataka na inona na inona mihitsy izy ireo.
Jun 25, 2008 ao amin'ny 7: 43 PM
Izaho ho an'ny iray, toy ny vola azo avy amin'ny Amazon Associates saingy tsy afaka nanaiky bebe kokoa momba ny fananganana rohy aho. Kivy be aho noho ny habetsaky ny hoops tsy maintsy itsidihako mba hahazoana rohy vokatra.
Raha te hampiasa ny iray amin'ireo fakan'izy ireo ianao dia tsio-drivotra. Fa rehefa mila rohy ho an'ny vokatra iray ianao dia fanaintainan'ny mpanjaka izany.
Oct 21, 2008 amin'ny 3: 18 AM
Tsy manana teboka lehibe kokoa ianao hoe maninona ny amazon no tsy mandeha tsara amin'ny ankamaroan'ny olona.
Amazon dia manome varavarankely 24 ora anao fotsiny raha mila mividy vokatra ianao. rehefa afaka izany, dia mahazo na inona na inona.
80% ny olona tsy hividy ao anatin'ny 24 ora.
Izaho dia manandrana ny sasany amin'ireo boky tsara indrindra amin'ny amazona ary mahazo tsindry be dia be aho.
Azoko antoka koa fa olona maro no tena hividy zavatra amin'izy ireo fa tsy ao anatin'ny 24 ora.
Ny fahaverezako 6% ary ny amazonako dia mahazo mpanjifa vaovao
Rememeber, ny ampahany sarotra indrindra amin'ny amazona dia ny fahazoana mpanjifa vaovao mandoa vola. Raha vantany vao manao izany izy, dia hitombo bebe kokoa amin'ny androm-piainan'ny mpanjifa.
Ao amin'ny tontolo mety dia hahazo vola amin'ny komisiona aho mandritra ny androm-piainan'ny mpanjifa tadiaviko.
Mampalahelo fa mandefa fifamoivoizana maimaimpoana fotsiny aho, ary tsy manao na inona na inona ho ahy.
Jun 18, 2013 ao amin'ny 9: 18 PM
Nanome varavarankely tsy manam-petra i Amzagong taloha, fa noho ny orinasa rehetra mijaly dia mitombo HATREHETRA izy ireo….
Dec 14, 2008 ao amin'ny 8: PM PM
Heveriko fa ny Amazon Associates no mbola tsara indrindra. Azo antoka fa somary saro-kenatra ny sasany amin'ireo fitaovana, fa raha mpamorona ianao dia tena omeny anao avokoa ny fitaovana ilainao amin'ny fanaovana varotra.
Jun 18, 2013 ao amin'ny 9: 16 PM
Fomba amerikana ve ny antsasaky ny boriky?
Jun 17, 2009 ao amin'ny 3: 57 PM
Amazon.com Ny tranokalan'ny Associates dia JOKA… Tsy afaka manavao ny adiresiko aho ao amin'ny pejy payee-info.html. Tsy olana amin'ny solosainako na amin'ny cookies na amin'ny firewall hoy ny soso-kevitra “fanohanana” an'i Amazon. Nilaza tamiko izy ireo fa tsy misy azon'izy ireo atao hanampiana ahy hanavao ny lahateny avy any North Carolina mankany amin'ny fanjakana hafa. Noho izany, heveriko fa hanidy ny kaontiko Amazon Associate aho ary ny asako taloha rehetra izay andehanako mankany atrash bin ary i Amazon dia tsy hahazo alina tsy mahita tory noho ny famoizana ahy satria mpiara-miasa aminy fotsiny SATRIA satria vazivazy ny tranokalan'izy ireo ary afaka ' izaho aza manavao ny adiresiko! Tsy hividy zavatra amin'ny Amazon.com intsony aho!
Jun 17, 2009 ao amin'ny 4: 01 PM
Google Adsense dia mandoa ny tranokalako an'arivony $ US raha Amazon jusyt mandoa ahy $ 7 - $ 12 isam-bolana. Heveriko fa tsy ara-drariny izany, hanaisotra rohy amazon amin'ny tranokalako tsy ho ela aho.
Jun 17, 2009 ao amin'ny 4: 31 PM
Raha ny tokony ho izy, vao tsapako fa nanome fifamoivoizana Amazon avy tao amin'ny tranokalako lehibe nandritra ny 6-8 taona lasa teo aho ary tsy tsapako fa efa nofoanana ny ID - Tsy nanelingelina ahy i Amazon fa nitifitra aho tamin'ny tsia. bala… dia nalain'izy ireo tamim-pahanginana sy tamim-pifaliana ny fifamoivoizana rehetra sy ny mpanjifa nalefako azy ireo ary tsy nilazany tamiko akory hoe afaka mahazo vola amin'izany aho…
Jun 17, 2009 ao amin'ny 6: 11 PM
Ny fanampiana Amazon dia nanome ahy ity adiresy mailaka manaraka ity ho an'ny fanohanana ny Program Amazon Associates: assoc-1@amazon.com .Ny valiny: "Nolavina ny adiresy. Antony: 550 ”. Izaho dia mpanjifa taloha tokoa Amazon.com...
Jul 19, 2009 amin'ny 11: 32 AM
omg Andrew, tsy nieritreritra ve ianao fa misy zavatra tsy mandeha rehefa tsy mahita vola miditra amin'ny Amazon ianao mandritra ny volana vitsivitsy?
Na izany na tsy izany, antony iray hafa tokony hiheveran'izy ireo ny fanavaozana ny serivisin'izy ireo ny tsy fananan'izy ireo fananganana sub-id (fanarahana ny teny fanalahidy) ho antsika izay manao PPC…
18 Jun 2013 amin'ny 6:37 AM
Ahoana no nanamboaranao ilay rohy? Manana olana mitovy amin'izany aho manandrana azy rohy amin'ny wordpress.